Otu International Society maka Krishna Consciousness - WRSP
1944: Prabhupada malitere ibipụta Laghachi na Chukwu, akwụkwọ e bipụtara n’asụsụ Bekee.
1987: GBC kwadoro ọnọdụ nke mgbanwe mgbanwe
1991: Ebubere ISKCON Foundation iji wulite mmiri na ndị Hindu kwabatara America.
Akụkọ banyere International Society for Krishna Consciousness (ISKCON), nke a maara dị ka njem Hare Krishna, jikọtara ọnụ na akụkọ onye malitere ya, onye nkụzi okpukpe (swami ) AC Bhaktivedanta Prabhupada. Amụrụ Abhay Charan De, na Calcutta, India, onye bidoro n’ọdịnihu ISKCON ji anya ya hụ mmezi ọgbara ọhụrụ nke India na nsonazụ ọchịchị ndị Britain. Ihe omuma ya na ihe omuma ya gosiputara na o nwere obi uto banyere mgbanwe di uku nke ndi mmadu, omenala, na teknụzụ nke gbara ya gburugburu ma nwekwaa mmasi nke ndi ezin’ulo ya, okwukwe, na omenala ya (Zeller 2012: 73-81). Dabere na akụkọ ndụ ya, Abhay tolitere n'okporo ámá si n'ụlọ nsọ Vaishnava, òtù okpukpe Hindu raara nye ofufe Krishna. Ngalaba okpukpe Hindu nke Chaitanya (Gaudya) Vaishnava nke a na-eme n'ụlọ nsọ, nke ga-emesị bụrụ ụdị Abhay Charan De nakweere na nke ọ ghọrọ onye na-akwado ya, bụ ụdị okpukpe Hindu. Ọ na-ele Krishna anya dị ka ụdị Chineke kachasị elu nke na-eke ma na-akwado cosmos, na onye bụ Chineke na ụwa (Goswami 1980).
Bhaktivedanta mere nke a, n'oge mbụ dịka onye nwe ụlọ site na okwu ihu ọha na akwụkwọ akụkọ ọhụụ ọhụrụ nke Bekee tọrọ ntọala na 1944, Laghachi na Chukwu . Mgbe ọ bịarutere America ihe karịrị afọ iri abụọ ka nke ahụ gasịrị, Bhaktivedanta ga-amalitegharị Laghachi na Chukwu, nke mechara bụrụ onye isi ọrụ nke ISKCON, isi akwụkwọ ya, na ụzọ edemede nke njem a si gbasaa onwe ya. Bhaktivedanta malitekwara ịsụgharị akwụkwọ nsọ Vaishnava na Bekee, ọkachasị Bhagavadgita na Bhagavata Purana.
Prabhupada hiwere ISKCON na New York City na 1966. N’ime ọnwa ole na ole ndị na-eso ụzọ ya na ndị tụgharịrị malitere ịgbasa Krishna Consciousness na American hippie counterculture, buru ụzọ gaa San Francisco wee banye n’obodo ndị ọzọ dị na North America. N'ime afọ abụọ nke ntọala ISKCON, Prabhupada na ndị na-eso ụzọ ya kụrụ ụlọ arụsị na North America na Europe, na-abanye na United Kingdom, Germany, France, na Canada, yana iguzobe oru na India n'onwe ya. Ndi otu ISKCON guzobere otutu obodo ime obodo, nke amara nke oma bu New Vrindaban, na West Virginia. Imirikiti ndị otu ahụ bụ ndị na-eso ụzọ oge niile, na-arara onwe ha nye mgbasa Krishna Consciousness na ibi n'ụlọ nsọ na obodo. Fọdụ malitere ịlụ, Prabhupada gọzikwara alụmdi na nwunye ha. Nkewa n'etiti ndi nwe ulo na ndi otu ndi mọnk oge nile gha eme ka esemokwu di na nmegha ahu. N'oge a ISKCON batara n'etiti klas okike, ya na George Harrison na John Lennon nke The Beatles na-enwe mmasị na Hare Krishnas na nkà ihe ọmụma ha. ISKCON abụrụla akụkụ a ma ama nke counterculture ntorobịa nke mbubreyo 1960s na mmalite 1970s (Knott 1986).
Mbibi dị na New Vrindaban (nyochara n'okpuru, n'okpuru Issues / Challenges), ọtụtụ esemokwu banyere ndị isi okpukpe, ọchịchị na-adịghị mma nke GBC, ebubo nke mmetọ ụmụaka n'ụlọ akwụkwọ ISKCON, na ọtụtụ ndị akpọsara nke ọma sitere na amara site n'aka Prabhupada aka ndị na-anọchi ya rụpụtara afọ iri nke ọnụọgụ ọnụọgụgụ na ịchọ mkpụrụ obi site n'aka ndị otu egwuregwu Hare Krishna. Mgbanwe mgbanwe malitere ịpụta n'ime ISKCON n'oge etiti 1980s na-akpọ maka nlekọta ka mma, ụkpụrụ omume doro anya maka ndị isi, yana itinyekwu aka nke ndị nwe ụlọ na ụmụ nwanyị na ndu nke ISKCON. Na 1987, GBC kwadoro ọtụtụ atụmatụ nke mgbanwe mgbanwe ISKCON, n'etiti ha na-ehichapụ "zonal acharya system" nke mepụtara mpaghara mmekọrịta nke onye ọ bụla na-arụ ọrụ dịka ndị isi okpukpe na-enweghị nlekọta (Deadwyler 2004).
Ekwesiri ighota aghari nke Hare Krishna dika uzo nke ulo akwukwo Chaitanya (Gaudya) nke Vaishnavism, nke di otua Alaka okpukpe Hindu na-achọpụta mmalite nke mgbanwe nke narị afọ nke iri na isii nke onye guru okpukpe Chaitanya Mahaprabhu (1486-1533). Dịka ọdịnala Vaishnava, IKSCON dara n'ime ụlọ akwụkwọ Hindu atọ kachasị ukwuu, na-elekwasị anya na nsọpụrụ nke Vishnu dị ka Chineke kachasị elu. (Schoolslọ akwụkwọ ndị ọzọ bụ Shaivism, ofufe Shiva, na Shaktism, na-asọpụrụ Shakti, nne nke Chukwu.) Okpukpe Hindu bụ ọdịnala dị iche iche, na n'ihi na echiche nke Hindu dị ka okpukpe dị n'otu bụ ihe ọhụrụ na n'ọtụtụ ụzọ ndị mba ọzọ na Hindu nghọta onwe onye (okwu a bụ nke mbụ ndị Hindu na ndị Alakụba nyere ndị Hindu iwu) onye nwere ike ịkọwapụta akụkọ ole na ole gbasara ọdịnala ahụ dum. Ndị Hindu na-anabata ozizi nke karma na nlọghachi, echiche nke iwu dị na mbara igwe (dharma), nkwenkwe na usoro nke okike na mbibi nke mbara igwe, ma jide na e nwere ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ n'ime ndụ nke na-ejedebe n'ọchịchọ nke nghọta onwe onye na nnwere onwe ime mmụọ (moksha). N'ụzọ dị oke mkpa, ndị Hindu kwenyere na chi ndị ahụ bụ anụ ahụ n'ụdị avatars iji mezuo ọrụ Chineke n’elu ụwa. Nke kachasi elu bu avatars nke Vishnu, okachasi Krishna na Rama dika akowara na akuko ndi Hindu nke Mahabharata, nke Bhagavadgita bu akuko ya, Ramayana, na akwukwo ife ofufe nke Bhagavata Purana. Ndị Hindu jikwa dị ka etiti ezigbo ihe kacha mma nke guru, nna ukwu ime mmụọ nke na-ewe ndị na-eso ụzọ ma na-akụziri ha otu esi achọ mmezu na nzọpụta nke mmụọ. Nkwenkwe okpukpe Hindu ndị a nile na-agafe na Vaishnavism, ụlọ akwụkwọ Chaitanya, na ISKCON kpọmkwem (Frazier 2011).
Schoollọ akwụkwọ Chaitanya bụ akụkụ nke bhakti ma ọ bụ ụzọ ofufe nke Hindu, ụzọ nke gafere ụlọ akwụkwọ dị iche iche nke omume Hindu ma bụrụ ogologo oge otu n'ime ụdị ndị Hindu kachasị ewu ewu. Bhakti ndị na-eme ihe omume hiwere isi n'okpukpe ha dabere na nraranye nye Chineke ha họọrọ, na-ejere Chineke ozi site na ofufe, ekpere, abụ, ọrụ mmekọrịta na ọmụmụ ihe. Ndị otu bhakti dị iche iche bụ ndị a malitere dị ka ndị na-efe ofufe na-ekwekarị nkwa ịme ụzọ ofufe, gụnyere ọnụọgụ ekpere ma ọ bụ ụdị ofufe. N'ihe banyere ISKCON, ndị na-efe ofufe bidoro were aha Vaishnava ọhụrụ na-ekwu maka ọrụ Chukwu ha.
Ulo oru Hare Krishna na ngalaba ndi ozo nke omenala Chaitanya wepu otutu ihe ndi Hindu ndi ozo ịghọta Krishna dị ka ezi ọdịdị nke Chineke, ma ọ bụ àgwà kachasị nke isi nke Chineke (iji asụsụ a na-anụkarị n'ime mmegharị ahụ n'onwe ya). Nke a gbanwere nkwenye ndị nkịtị nke ọtụtụ ndị Hindu kwenyere na Krishna bụ otu n'ime ọtụtụ avatars ma ọ bụ ọdịdị nke Vishnu. Dị ka onye Indologist na ọkachamara na ọdịnala Vaishnava Graham Schweig si kọwaa, “ndị Chaitanya na-ewere Krishna dị ka Onye kachasịnụ ukwuu karịa Chineke n'etiti isi chi nke onye Vishnu dị ebube ma dị ike si n'aka. A maara Krishna dị ka purnavatara, 'ngbanwe zuru ezu nke chi' '(Schweig 2004: 17). N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ndị otu Hare Krishna na-elegara Krishna anya dịka ọdịdị nke Chukwu na nke zuru oke yana ọdịdị dị iche nke Chineke bụ onye were ọdịdị na India oge ochie dị ka avatar. Ndị na-akwado ụlọ akwụkwọ Chaitanya gosikwara na ha dị iche na ndị Hindu ndị ọzọ site na ịkọwa onye ahụ n'onwe ya, Chaitanya Mahaprabhu, dị ka nnabata nke Krishna.
ISKCON ndị na-efe ofufe bụ otu ofufe, na-ekwenye na chi ndị ọzọ nke Hindu bụ naanị ndị nọ n'ọchịchị na-ejere Krishna ozi, ha na-efe Krishna n'ụdị dị iche iche ọ na-ewere. Ma nkà mmụta okpukpe ISKCON ghotara na Krishna dị na njikọta ọnụọgụ abụọ nke Radha-Krishna, ebe Radha bụ nwanyị na-ahụ n'anya nke nwoke Krishna, onye na-eme njem ( gopi ) nke na-ese onyinyo onye na-etinye onwe ya n'onwe ya n'ịchọ mmekọrịta chiri anya na Chineke. Ndị na-efe ofufe na-asọpụrụ ndị avatars, ndị mmekọ, na ndị nsọ nsọ nke Krishna, dịka Rama, Balaram, Chaitanya, na osisi basil dị nsọ ( tulasi ) nke ndị na-eso ụzọ kwenyere bụ ọdịdị nke ụwa nke otu n'ime ndị mmekọ Krishna na mpaghara ime mmụọ.
Otu akụkụ dị mkpa nke nkwenkwe ISKCON bụ isi okwu nke echiche nke Vedas, ihe ọmụma Vedic, na Vedism. Prabhupada na ndị ọzọ zoro aka na ọdịnala ahụ dị ka "sayensị Vedic" ma hụ Society dị ka ịgbasa ụkpụrụ Vedic na ụwa nke oge a. Vedas bụ ederede dị nsọ nke India, mbido, mkpakọrịta nwoke na nwanyị, na mpaghara ya nke ndị ọkà mmụta, ndị ọkachamara, na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-ese okwu. Dị ka ndị Hindu ndị ọzọ, ndị na-efe ofufe kwenyere na Veda bụ ihe kacha mkpa dharma : eziokwu na-adịghị agafe agafe nke ndị amamihe oge ochie dere ma na-egosi eziokwu bụ isi na iwu dị n'okpuru ụwa, nhazi ọha mmadụ, ebumnuche ibi ndụ, na ọdịdị nke Chukwu (Frazier 2011). ISKCON na-ele anya na corpus Vedic dịka Puranas, Bhagavadgita, na isi mmalite ndị ọzọ, ebe ọ bụ na ha ghọtara akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị a dịka akụkụ nke otu ọdịnala okpukpe na nke ederede dịka isi mmalite Vedic.
Ihe omuma nke ISKCON bu nke ikwe aha Chineke n'ụdi mahamantra (nnukwu mantra): Hare Krishna, Mgbada Krishna, Krishna Krishna, Rama Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mahamantra a ọ bụghị nanị na-enye njem ahụ aha ya na-edeghị aha ma ọ bụ aha a na-ahụkarị kamakwa ọ na-ejikọ ISKCON na mmepe mmụta okpukpe nke Chaitanya, bụ onye buru amụma na mgbanwe mgbanwe nke narị afọ nke iri na isii ya na abụ, yana Bhaktisiddhanta, bụ onye mesikwara ike. Chaitanya, Bhaktisiddhanta na Prabhupada niile kwusiri ike na ịbụ abụ abụghị naanị ihe na-atọ Chineke ụtọ ma na-arụ ọrụ nke mmụọ mana ọ dịkwa mfe ịme, enwere ebe niile, ma dabara maka oge a. Ndị otu ISKCON bidoro kwere nkwa ịkpọọ agba iri na isii nke Hare Krishna mahamantra kwa ụbọchị, ebe agba nke ọ bụla gụnyere 108 repetitions repetitions nke mantra. Fọdụ ndị na-efe ofufe na-eme nke a n'ụlọ arụsị, ndị ọzọ n'ụlọ arụsị, ndị ọzọkwa n'ubi, ogige ntụrụndụ, ebe ọrụ, ma ọ bụ mgbe ha na-eme njem kwa ụbọchị. Ntkpọ egwu, yana ịgbaso ụkpụrụ nduzi (enweghị mmekọahụ rụrụ arụ, ihe ọ intoụxicụ na-egbu egbu, iri anụ, ma ọ bụ ịgba chaa chaa) bụ obi nke omume okpukpe na Krishna Consciousness (Bhaktivedanta 1977).
Prabhupada kwusiri ike nkesa akwụkwọ, na inye onyinye ma ọ bụ ire akwụkwọ bụ otu n'ime ụdị ndị a na-ahụkarị nke omume okpukpe na ISKCON n'èzí na-abụ abụ. N'ụbọchị mbụ nke ngagharị, ndị na-efe ofufe ISKCON rụụrụ onwe ha aha na-ere akwụkwọ, akwụkwọ akụkọ, na akwụkwọ nta n'okporo ámá, ogige ntụrụndụ, na, nke kachasị ama, ọdụ ụgbọ elu. Ebugharị njem ahụ maka omume ndị a na mmemme ọdịbendị ndị ama ama America dịka Ụgbọelu! na Ihe nkiri Muppet. Usoro ikpe nke ụlọ ikpe na 1980 amachiri ike ịme nkesa akwụkwọ na ebe ọha na eze. Site na nká nke usoro a, ihe omume ọha na eze dị ka nkesa akwụkwọ, ịgụ egwu, na ikwusa ozi ọma (a na-akpọkọta sankirtana ) adịla nkịtị.
Na-arịwanye elu, ndị òtù ISKCON na-ele anya na itinye aka n'okpukpe ha dị ka ndị na-adabere na ịga ụlọ nsọ kwa izu na-efe chi ofufe n'ebe ahụ. Ọ bụ ezie na ofufe ụlọ nsọ gbatịrị ụbọchị mbụ nke ngagharị ahụ, ọbịbịa nke ndị ọgbakọ na mgbanwe igwe mmadụ nke mere ka ndị nọ n'ọgbakọ bụrụ ụkpụrụ emewo ka izu ụka ụka na-abịa kwa izu bụrụ isi. Na United States, ebe ụkpụrụ Protestant metụtara Gburugburu ebe obibi, ụlọ nsọ ISKCON na-efe ofufe kwa izu na Sọnde. N'oge ofufe chi n'ụlọ arụsị, ndị na-efe Hare Krishna na-etinye aka n'ụdị ofufe dị iche iche (bhakti ), gụnyere ọrụ nye Krishna (puja ), na ilele Krishna (darshan). ISKCON na-agbaso ụkpụrụ Vaishnava na ụkpụrụ ofufe Hindu sara mbara yana obere obere mgbakwunye, dị ka ekele nye onye nchoputa ISKCON Swami AC Bhaktivedanta Prabhupada site na abụ na ekpere ndị a na-ekwu.
Ofufe temple na-ejedebe na nri a na-erikọ ọnụ, na nri ndị a, "oriri", dịka mgbasa ozi ISKCON kpọrọ ha kemgbe 1965, na-adọta ọtụtụ ndị bịara. O doro anya na ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-eri oriri na oriri ISKCON bụ ndị na-efe ofufe bụ ndị sonyere na ọrụ ụlọ nsọ, mana ndị otu Hare Krishna na-eji oriri ya eme ihe dị ka mgbalị mgbatị, na n'ọtụtụ ọnọdụ ndị na-achọ mmụọ, ụmụ akwụkwọ kọleji agụụ na-agụ, na ndị chọrọ ịmata ihe na-agakwa . Ihe a na-eri bụ nri ime mmụọ (prasadam) nke e nyere Krishna, ndị na-akwado ya kwenyere na ịkwadebe, ikesa, na iri ya bụ omume ime mmụọ. Na mpụga ụlọ arụsị, ndị na-efe Krishna na-enye prasadam na saịtị sitere na ogige ọha na eze na ogige kọleji na n'okporo ámá obodo. Ndị na-eso ụzọ na-ele anya na nkesa nke nri ime mmụọ dịka ọ bụghị naanị omume okpukpe kamakwa otu ụdị nke ozioma yana ọdịmma ọha na eze na inye ndị agụụ na-agụ nri (Zeller 2012).
Kalenda okpukpe ISKCON jupụtara na ezumike sitere na site na ibu ọnụ kwa izu ruo n'ememe ọnwa kwa ọnwa ruo na kwa afọ. ememme. Ememe ndị dị otú a na-echeta ọrụ nke Krishna, ndị na-eso ụzọ ya kacha nso, na ndị isi ndị isi nke usoro ISKCON, dị ka ọmụmụ na ọnwụ nke Chaitanya na Prabhupada. Ndị ISKCON na-eme ememme niile bụ isi na Hindu dị ka Holi, Navaratri na Divali, mana ha na-eme ya n'ụzọ na-egosi Krishna karịa chi ndị ọzọ Hindu. Ememe nke ezumike nke na-adabere na chi ndị ọzọ, dị ka Shivaratri, bụ okwu esemokwu n'etiti obodo ISKCON. Ọtụtụ ndị na-efe ofufe sitere na Western enweghị mmasị na nsọpụrụ maka ihe ha na-ewere dị ka ndị chi, ọtụtụ ndị India mụrụ ofufe na-achọ isonye na akụkụ dị oke mkpa nke ọdịnala ọdịnala-ọdịnala ha.
Ma n'ụwa nile ụlọ nsọ ISKCON dị na mpaghara nwere nnukwu ohere banyere etu ha si agba ọsọ ha ihe omume gị. Ndị mmadụ n'otu n'otu na obere otu nke ndị na-efe ofufe akwadowo ụlọ nke ụlọ nsọ ọhụụ, mmezigharị nke ndị agadi, na ịgha mkpụrụ nke obodo ọhụụ na-ezukọ n'ụlọ mmadụ ọ bụla ma ọ bụ ebe akwụ ụgwọ. Ndị isi obodo na-ahụ maka ofufe, mmemme, na ọrụ agụmakwụkwọ na ụlọ arụsị, ma ha na-eme ya na mkpa obodo nke obodo ha. Ọ bụ ezie na a na-ekekọrịta ọrụ chi, ederede, na nkuzi n'ofe obodo ISKCON niile, ọdịiche dị ukwuu dị n'ụdị ọnọdụ na ọrụ mmekọrịta nke ụlọ arụsị. Somefọdụ ụlọ nsọ na-enyekarị ezinụlọ na ndị ọgbakọ aka, ndị ọzọ na-arịọ ndị na-achọ mmụọ ma ọ bụ ụmụ akwụkwọ na-eto eto. Somefọdụ ụlọ nsọ na-arụ ọrụ dị iche iche na izisa ozi ọma, ndị ọzọ bụ ebe dị egwu nke mmekọrịta mmadụ na ọdịbendị, ndị ọzọ na-arụkwa ọrụ dịka ụlọ nzukọ ofufe a na-eji eme ihe naanị n'oge ofufe ụlọ nsọ kwa izu.
A ghaghi edeputa nyocha zuru oke nke ochichi nke ndi isi ochichi na ISKCON, obu ezie na otutu nyocha di nkenke (Rochford 2009; Deadwyler 2004). N'oge ndụ ya, Prabhupada jere ozi dị ka ọ bụghị naanị onye nchoputa na onye ndu nhazi, mana naanị guru na onye isi mmalite nke usoro ahụ. Ka ọ na-erule ọgwụgwụ nke ndụ ya ọ họpụtara ndị ụkọchukwu nke na-anọchitere ya ozi (ndiegwu) ịmalite ndị na-eso ụzọ. Mgbe ọnwụ ya gasịrị, ndị a kwupụtara onwe ha gurus, “zonal acharyas,” nke ọ bụla na-eduga mpaghara mpaghara ụwa dịka naanị guru. Prabhupada enyekwara GBC ike (nke ndị gurus na-arụ ọrụ, ma ọ bụghị n'ọtụtụ ọrụ) BBT, na ụlọ ọrụ ndị ọzọ iji duzie ma duzie usoro ahụ. Ọtụtụ n'ime ndị gurus gosipụtara na ha enweghị ike idu, ma ọ bụ nke rụrụ arụ, nke na-adịghị mma, ma ọ bụ ha abụọ. Ndị Gurus na GBC batara na esemokwu na-arịwanye elu, rue mgbe GBC mechara kwụsị usoro acharya zonal ma tinyekwa onwe ya n'ọrụ dị ka ikike kachasị elu nke usoro ahụ. GBC gbasaa ọnụ ọgụgụ nke ndị gurus iji belata ikike ha nwere n'otu n'otu ma lekwasị anya na Krishna Consciousness n'onwe ya karịa onye ozi ahụ.
O doro anya na ihe kachasị njọ n'akụkọ ihe mere eme nke ISKCON gụnyere otu onye guru dara ada, na ebe ndị agrarian na-agagharị. kwurita, obodo New Vrindavan dị na mpụga Moundsville, West Virginia. Ebubere na mbụ iji jee ozi dị ka obodo dị mma iji gosipụta nkuzi okpukpe, mmekọrịta mmadụ na ọdịbendị nke ISKCON, onye isi ọhụụ Vrindavan ejiri nwayọ nwayọ pụọ n'echiche na ntụzịaka ndị ọzọ, na-emecha chụpụ obodo site na ISKCON na 1988 Onye ndu ya, onye mbụ soro ụzọ Prabhupada nwere aha okpukperechi nke Bhaktipada, chọrọ ịme ka ndị okpukperechi okpukpe na nke doro anya nke ndị Kraịst tinye aka n'okpukpe ha, yana bulie onye isi obodo ya dịka Prabhupada na karịa ikike nke GBC. Ka oge na-aga, e boro ọtụtụ ndị a ma ama n’obodo ahụ itinye aka na mpụ na mmebi iwu dị iche iche, gụnyere mmetọ ụmụaka, ị drugụ ọgwụ ọjọọ, ịzụ ahịa ngwa agha, na imecha igbu mmadụ. A mara Bhaktipada ikpe nke ịchụpụ gọọmentị etiti ma maa ya ikpe n'ụlọ mkpọrọ. Ebufere ya na ISKCON, ọ nwụrụ na 2011. Mgbe ewepụsịrị ya na ike, ejiri nwayọọ nwayọọ weghachite obodo na ogige ISKCON (Rochford na Bailey 2006).
Isi ihe dị n'etiti ndị na-alụghị nwanyị na-edu ndú na echiche na-ezighi ezi banyere ụmụ nwanyị, ụmụaka, ndị nwoke nwe ụlọ (ya bụ, ezinụlọ) mere ka e kee ebelata sistemụ, ụdị ụlọ akwụkwọ nnabata okpukpe maka ụmụaka amụrụ n'ime Krishna Consciousness. Ndị isi na-alụbeghị di na nwunye ahụ chọrọ ka usoro a nyere aka igbochi mgbakwunye ụmụaka na nne na nna ha ma nye ha ohere ilekwasị anya na Krishna bhakti, ndị gurukulas hapụkwara ndị nne na nna ka ha lekwasị anya na ọrụ ha na Society karịa ịzụlite ụmụaka. N'agbanyeghị nke ahụ, ndị gurukula n'ozuzu ha dara ụmụ akwụkwọ ha, bụ ndị kọọrọ akụkọ ọjọọ. Ọtụtụ ikpe a ma ama nke mmeso ọjọọ, nleghara anya mpụ, na ọbụna mmetọ ụmụaka dugara n'usoro ikpe nke ụlọ ikpe na mmechi mmechi nke ọtụtụ gurukula s na mgbanwe nke ole na ole fọdụrụ (Deadwyler 2004).